Short height sliding steel door wardrobe with 1 hanging rod and 1 shelf (including base) ဘေးဆွဲစတီးတံခါး (၂)ချပ်နှင့် အ၀တ်အစားဗီရိုအလတ်ဖြစ်သည်။ အ၀တ်ချိတ်တန်း (၁)ခုနှင့် စင် (၁)စင်ပါဝင်သည်။ (အောက်ခြေပါဝင်သည်။)
Sliding glass door cabinet with2adjustable shelves and keylock. ဘေးဆွဲမှန်တံခါးဗီရိုဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် စင် (၂)စင်ပါဝင်ပြီး သော့ခတ်နိုင်သည်။
Sliding glass door cabinet with2adjustable shelves and keylock. ဘေးဆွဲမှန်တံခါးဗီရိုဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် စင် (၂)စင်ပါဝင်ပြီး သော့ခတ်နိုင်သည်။
SLIDING GLASS DOOR CABINET-5 Fts.
Sliding glass door cabinet with2adjustable shelves and keylock. ဘေးမှန်ဆွဲတံခါးဗီရိုဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် စင် (၂)စင်ပါဝင်ပြီး သော့ခတ်နိုင်သည်။
SLIDING STEEL DOOR CABINET-4 Fts.
Sliding door cabinet with2adjustable shelves and keylock. ဘေးဆွဲတံခါးဗီရိုဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် စင် (၂)စင်ပါဝင်ပြီး သော့ခတ်နိုင်သည်။
SLIDING STEEL DOOR CABINET-5 Fts.
SLK-02 Showcase 100cms
Show case and storage cabinetSize : W100*D44*H112 cm.Showcase with storage 100cms
Ks 217,000 Ks 235,000 -Ks 18,000
SLK-03 Showcase 147cms
Show case and storage cabinetSize : W147.4*D44*H112 cm.Showcase with storage 147cms
Ks 257,000 Ks 279,000 -Ks 22,000
Sliding door cabinet with2adjustable shelves and keylock including base. ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်စင် (၂)စင်နှင့် သော့ခတ်နိုင်သည့် ဘေးဆွဲတံခါးဗီရို။ အောက်ခြေပါဝင်သည်။ Size: W118.5*D40.7*H129 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၁၈.၅၊ အနံ ၄၀.၇၊ အမြင့် ၁၂၉ စင်တီမီတာ
Ks 167,500 Ks 182,000 -Ks 14,500
BV-11: Desk 90cm BV-11 စားပွဲ ၉၀ စင်တီမီတာ Size: W90*D37.5*H73 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၉၀၊ အနံ ၃၇.၅၊ အမြင့် ၇၃ စင်တီမီတာ Weight : 15 kg Dimensions : 90 x 49 x 122 cm Color : BM-Matte Black, WH-Pure White
Kurve – TV cabinet with3drawers and shelf Kurve – အံဆွဲ (၃)ခုနှင့် စင်ပါသော TV စင်ဖြစ်သည်။
PUNTO TV cabinet PUNTO TV စင် Size: W150*D40.7*H52 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၅၀၊ အနံ ၄၀.၇၊ အမြင့် ၅၂ စင်တီမီတာ
TV STAND W/O DRAWER
TV stand with shelf and sliding glass door. ဘေးဆွဲမှန်တံခါးနှင့် စင် (၁)စင်ပါရှိသော TV တင်ခုံ။ Size: W132*D55*H54 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၃၂၊ အနံ ၅၅၊ အမြင့် ၅၄ စင်တီမီတာ
TV stand with drawer and sliding glass door. ဘေးဆွဲမှန်တံခါးနှင့် အံဆွဲပါရှိသော TV တင်ခုံ။ Size: W132*D55*H54 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၃၂၊ အနံ ၅၅၊ အမြင့် ၅၄ စင်တီမီတာ
UNI-BOX2DRAWERS
Uni-box2drawers with ball bearing runner system. Uni-box အံဆွဲ (၂)ခုပါဝင်ပြီး၊ လျှပ်ပြေးဘောစေ့လုံးလေးများစနစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
UNI-BOX GLASS DOOR
Uni-box glass door with 1 shelf and keylock. Uni-box မှန်တံခါးနှင့်ပုံးဖြစ်သည်။ စင် (၁)စင်ပါဝင်ပြီး သော့ခတ်နိုင်သည်။